Ceni sy Hcc : Tsy voatery hitovy ny vokatra
08/11/2018 admintriatra 0
Isan’ny nanahirana hatramin’ izany ny tsy fitovian’ ny vokatra havoakan’ ny vaomiera mahaleo tena misahana ny fifidianana sy ny fitsarana avo momban’ny lalàm-panorenana. Noamafisin’ ny filohan’ ny fitsarana avo momba ny lalàm-panorenana io omaly, nambarany …Tohiny
Hery Rakotomanana : Mpitari-bato vilam-bava
Efa nampoizina. Na tsy mbola nanomboka aza ny fifidianana dia efa hita avy hatrany ny lesoka tamin’ny fikarakarana ny fifidianana ary niteraka fimenomenomana teny anivon’ ny fiarahamonina manerana an’i Madagasikara izany. Tonga teo amin’ny daty …Tohiny
Vokam-pifidianana : Mitarika amin’ny biraom-pifidianana maro Ravalomanana
Miovaova araka ny faritra sy ny faritany ny voka-pifidianana tamin’ity fifidianana izay ho filoham-pirenena ity. Amin’ny ankapobeny dia mitarika amin’ny biraom-pifidianana maromaro ny kandida Ravalomanana indrindra ny eto Antananarivo, Antsirabe ary Ambatondrazaka. Santionany amin’izany ny …Tohiny
Fifidianana 2018 : Nikorontanana tanteraka
Tsindrian-daona nandritra ny fotoana ela ny vahoaka niandry na ho tanteraka ihany na tsia ny fifidianana. Tontosa soa aman-tsara izany na teo aza ny tsy fahatomombanana maro isan-karazany tsikaritra nandritra ny fanomanana, nandritra ny andron’ny …Tohiny
Kidnapping : Milalao tanana ny TIM sy MAPAR
Tahaka ireny horonantsary vokarina any Hollywood ireny mihitsy ny fomba nakan’ireo mpanao kidnapping ny vadin’ny tale jeneralin’ny SODIAMA ny zoma faha-6 Jolay lasa teo teny amin’ny tokontanin’ny Immeuble Assist Ivandry, araka ny hita amin’ny horonantsary. ...Tohiny
Pm Japoney Shinzo Abe : Nampirisika ny Filoha tamin’ny ezaka vita
filoha Hery Rajaonarimampianina : hanatrika ny fametrahana ny Kardinaly any Vatican